Imisebenzi yomzali womyeni ngaphambi komtshato
Umtshato ngowona nto ivuya kakhulu, kodwa kunye nokubhiyozela kakhulu. Yingakho wonke umntu akhumbule imisebenzi yakhe ukuze abe nexesha. Kodwa kwenzeka kuphela ukuba izalamane zihlala ziqonda ukuba zifanele zenze ntoni kwaye, ngenxa yoko, zikhoyo. Yingakho kubalulekile ukuba umyeni kunye nomtshakazi baxelele kwiintsapho ukuba bafanele benzani. Ngokomzekelo, kukho imisebenzi ethile yomzali womyeni ngaphambi komtshato.
Imisebenzi yomama womyeni
Ziziphi ezi zinto zenziwa ngabazali bomyeni ngaphambi komtshato? Masiqale, mhlawumbi, nomama womyeni. Kakade, okokuqala, kufuneka alungiselele unyana othandekayo kwimini yomtshato. Oku kuthetha ukukhetha i-suit kunye nezixhobo. Umama womyeni unembopheleleko ngokupheleleyo kwendodana yakhe kwimbhiyozo yomtshato. Inyaniso kukuba umama-mkhwenkwezi uza kubona umalokazana wakhe ngaphambi komhla womtshato, ngoko ekhangele ingubo yakhe, ngokuqinisekileyo uya kuthatha isitifiketi esifanelekileyo kwonyana wakhe. Kwakhona, ngexesha lokulungiselela umtshato, unina womyeni unyanzelekile ukuba amncede akhethe isipho somtshakazi. Sekunjalo, akubona bonke abantu abaselula abakwazi ukufumana oko kuyimfuneko ukuthenga umfazi othandekayo, ngoko ukuba uyayithanda ngempela isipho.
Kwakhona, umama womyeni kufuneka alungiselele intlanganiso yabaselula emva komzobo. Kubalulekile ukuba ulandele isonka esimnandi esilindele ukuba abasandul 'ukutshata emzimbeni wabo oqhelekileyo, kwaye balungiselele intetho kunye neenqweno kubantwana. Ukongeza, ukuba ulandela izithethe, umama womyeni kufuneka abe nekhanda elihle apho uya kubopha intloko encinci, njengophawu lokuba ngoku ungumfazi osemthethweni.
Nguwo umama womyeni owenza imoto yokuhlobisa. Nangona izinto zokubhabisa zikhethwe kunye nomtshakazi, umsebenzi womama ekuseni kusuku lomtshato ukuyihlobisa imoto ukuze ibe yinto enhle kakhulu, ithenda kunye nesithandane.
Kwakhona, imisebenzi yabazali bomyeni, kunye nabazali bomtshakazi, iquka intlangano yesidlo. Kule meko, abadibaniselwano badibana kunye nabantwana kwaye baxubushe ngokuchanekileyo ngokufanelekileyo malunga nolubuzo lwemibuzo, ukuba iindleko ziya kwahlulwa kanjani, bangaphi abantu abaza kumenywa. Kakade, oku kunjalo kuphela xa umtshato uqulunqwe ngoncedo lwabazali kunye nabamama. Ukuba abantu abaselula abaceli inkxaso yezemali kubazali babo, le mhlathi ayishiyi.
Imbopheleleko kayise yomyeni
Ngokuphathelele uyise womyeni, ngoko, akanalo imisebenzi ethile kunye nemiyalelo ngokwenza izinto ezithile kunye nemigangatho ngaphambi komtshato wonyana wakhe othandekayo. Ngako oko, unelungelo lokukhetha into enokuyenza. Nangona kunjalo, ngokuphindaphindiweyo, ngaba ooyise beejaji abathwala uxanduva lobugcisa. Okokuthi, uTata uphethe uxanduva lokumisa imoto, umfaki-zithombe kunye nomsebenzisi. Ukongeza, ukuba abazali bathabatha inxaxheba ngokuthe ngqo ekuhleleni isidlo, uyise ungathatha ukuthengwa kotywala, apho amadoda angcono kunabesifazane.
Kwakhona, phambi komtshato, uyise womyeni, njengonina, kufuneka alungiselele intetho aza kudibana nabaselula emva kweofisi yokubhalisa. Nangona intsikelelo yokuqala ifunyenwe kumama, amazwi kunye nezifiso zobawo zibaluleke kakhulu.
Nangona uyise womyeni kufuneka akhumbule ukuba kuya kufuneka adlale nomalokazana wakhe edilini lomtshato. Ngoko ke, ukuba upapa akadli ngokugqithiseleyo okanye wamlibala, kufuneka ahlaziye kwaye akhumbule ngaphambi komtshato. Ewe, ukuba uyakwazi ukudansa ubuncinane amaxesha amaninzi kunye nomalokazana wakhe.
Kodwa ke, nangona kunjalo, umsebenzi oyintloko wabazali ngaphambi komtshato kukukwazi ukubonisa ukuba umtshato uyamangalisa ngokwenene, mnike unyana ngcebiso kunye neengcebiso eziyimfuneko, kwaye ungabonakali uvuyo kwaye uhlale unika inkxaso kwaye uncedise naziphi na izimo. Emva koko, nokuba yintoni na izithethe zezibophelelo zabazali, kufuneka zihlale zikunceda unyana kuyo yonke imicimbi awabathethileyo ngayo, ngokuphathelele umcimbi womtshato. Ngombulelo wobomi namava, umama noba banokuhlala bencedisa ukufumana isigqibo esilungileyo kunoma yintoni na imeko.
Jonga ubukhoma: ukwakheka komtshato kwamehlo aluhlaza
Umtshato omnandi: umkhwenkwezi wokwenza umkhosi
Indlela yabantwana: indlela yokugqoka umntwana ngomtshato
Ukunyamekela umzimba, ubuso kunye neenwele ngaphambi komtshato
Ingxolo njengesipho - ukubetha ngaphambi komtshato?
Umtshato wokulungelelanisa: kunye nokuchasene
Indlela yokufundela ikati ukuba ihambe ebhodweni?
Ezinye iingcebiso malunga nokuba ungayiguquli ngesini isenzo
Umyili wezindleko uRuth Myers
Golden Berry: I-Best Homemade Sea Buckthorn Recipes
ISobchak, Navalny, Rudkovskaya kunye nabanye abadumileyo bawubhiyozele umhla wokuzalwa "umzila" wesitayile, isithombe
Ukukhanyisa okufanelekileyo kwendlu
I-Gazpacho kunye nomsila kunye nefennel
Iifoni kunye nokuziphathisa okanye ukuzisusa
Ukulungiselela abantwana kwi-kindergarten
Ukuzivocavoca ukuqinisa intamo
Ingxaki yengqondo yabantwana abaselula kunye neendlela zokuzisombulula
Ingulube kunye ne-chestnuts
Ngaba ungayi kulahlekelwa ngumsebenzi wakho?
Maslenitsa 2017 - ukuhalaliswa kwindinyana kunye ne-SMS emfutshane kwimihla yonke iMaslenitsa iveki. Amakhadi ahlekisayo kwiveki yePancake kunye nezicelo zokuxolelwa ngeprojekthi kwiCawa elixolelwe
Indlela yokupheka ukutya kwasekuseni okukhawulezayo nangokukhawuleza?
UKsenia Sobchak waxoxa ngokukhulelwa kwakhe kwi-Twitter
I-cookie i-almond kunye ne-ukhilimu